Dhageyso: Bulsho weynta ku nool magaalada baydhabo oo kahadleen faafitaanka cudurka Coronovirus | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA Dhageyso: Bulsho weynta ku nool magaalada baydhabo oo kahadleen faafitaanka cudurka...
Dhageyso: Bulsho weynta ku nool magaalada baydhabo oo kahadleen faafitaanka cudurka Coronovirus
Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa kulan deg-deg ah oo looga arrinsanayo qatarta sii baahayso ee cudurka Coronovirus la yeelatay qaar ka mid ah Safiirrada Caalamka ka jooga Dalka iyo hay’adaha samafalka.
Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya, Fowziya Abiikar Nuur ayaa warbixasay halka uu marayo qorshaha Qaran ee u diyaar garowga iyo ka hortagga cudurka coronavirus, waxayna intaa raacisay in la diyaarinayo oo ay gaba-gabo marayaan goobo loogu talo-galay in lagu karantiilo Dadka ka yimaada Dalalka uu cudurka saameeyay.
Sidoo kale Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa bulshada soomaaliyeed waxay ugu baaqday in la iska wacyi galiyo sidii looga hartagi lahaa cudurka Coronovirus si qatarka cudurkaani looga hotagao ayaa wasiirada caafimaadka soomaaliya Fowziya Abiikar Nuur ku sheegtay in layareeyo goobaha dadka ay ku badan yihiin sida meelaha shaaha lagu cabo` baararka iyo meelaha kale.
Hadaba baqaani kazoo yeeray Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa waxaa fikirahooda ka dhiibtay qaar ka mid ah bulsho weynta ku nool magaalada baydhabo, waxayna soo dhaweyeen arinta Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya.
Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada sida aad uga barateen inay mar walba idin la wadaagto wararka saxda ee la xariira Caabuqa COVID-19, waxay idin la wadaagaysaa war-saxaafadeed-kaan, si aan uga hortagno faafinta wararka been abuurka iyo kutiri-kuteenta ah ee looga danleeyahay walwal galinta bulshada Soomaaliyeed.
W” Q: Wariye Siid Cali Muuse Ateera.
Previous articleFaransiiska iyo Spain oo dalalkooda ku soo rogay tallaabooyin ay ku xakameynayaan feyraska Koron
Next articleDowladda oo mamnuucdey inay dalka soo galaan dadka ka imaanaya Afar dal.